Vivian ကို ကြည့်ပါ … | Layma's World
Filed under: Heart touching movie, That's what I wanna say |
« ဟိုးတုန်းက ဒုက္ခ.. အခုတော့ဟာသ လေးမရဲ့ ရိုက်ချက် »
Amigo, on March 2, 2009 at 9:18 pm said:
heart touching movie ဆိုပါလား ။ ဒါအသစ်ပဲ ။ နောက်လည်း မျှော်ရဦးတော့မှာပဲ ။
ဂျူလီယာရောဘတ် လား … ။ အတိတ်ဟောင်းတွေ ပြန်သတိရတယ် ။အော် .. ကျနော်နဲ့ မဆိုင်ပါဘူးလေ ။ မဆိုင်တော့ပါဘူး ပေါ့ .. 😛 ။
pretty woman .. walking down the street ….. သီချင်းလေး ညည်းမိပေါ့ ။
ဝတ်ပုံ စားပုံ တွေကတော့ ရန်ရန်ချမ်းနဲ့ ဇေယျာသော် နောက်ဆုံး ဆိုသွားတဲ့ သီချင်းတောင် သတိရတယ် ။
မကြည့်သော်လည်း မြင်တာတွေကြောင့် ခက်သဗျာ ။
ကြွက်မီ, on March 2, 2009 at 9:34 pm said:
ဟုတ်.. မောင်မျိုးညွှန်းလို့ သေချာလာဖတ်သွားပါတယ်။
ပေါ့ပါးလွန်းပြီး ကြည့်မကောင်းတာတွေ ထက်မြက်တာနဲ့ ကလက်တာ မခွဲခြားတတ်တာတွေ မြင်ရကြုံရပါတယ်။
နောက်ဆုံးတော့လည်း ဆင်ခြင်ခွဲခြားတတ်တဲ့သူက ပိုတိုးတက်တာပါပဲ။
ဘာအလုပ်လုပ်ရင် ဘယ်လိုဝတ်စားရတယ်။ ဘယ်လိုဝတ်စားမိရင် ဘယ်လိုနေထိုင်ရတယ် ဆိုတာလည်း သတိထားသိတတ်မှ ကောင်းတာပေါ့။
မြန်မာချင်းကမှ အမြင်မတော်ရင် အပြောအဆို အမူအယာကနေ သိနိုင်သေးတယ်။ နိုင်ငံခြားသားကျတော့ ဘာအရိပ်အယောင်မှ မပြပေမယ့် ထင်ချင်သလိုထင်သွားတတ်ပါတယ်။
nu-san, on March 2, 2009 at 9:39 pm said:
ကောင်းလိုက်တဲ့ ပို့စ်ပါ လေးမရေ… ဒီမှာလည်း အ၀တ်အစားကို အင်မတန် ဂရုစိုက်ကြတယ်။ ဒူးနေရာဒူး တော်နေရာ တော်ပေါ့။ ရုံးမှာဆိုရင်လည်း အ၀တ်အစားကို တင်းကျပ်တယ်။ ကောင်းကောင်း ညွှတ်နေအောင် ၀တ်ရမယ် မဟုတ်ပါဘူး။ ဂျင်းဘောင်းဘီ၊ ဂျင်း အကျီင်္ မ၀တ်ရဘူး၊ လို့ တားမြစ်ထားတယ်.. စကပ်တော့ ၀တ်လို့ရတယ်။ Customer နဲ့ နေ့စဉ် ဆက်ဆံရတဲ့ သူတွေဆို ပိုဆိုးတယ်။ အမြဲတမ်း အနောက်တိုင်းဝတ်စုံပဲ။ ဒီက မိန်းကလေး အများစုက စကပ်အတို ဘောင်းဘီအတို ၀တ်တယ်.. ဒါပေမယ့် အောက်က ခြေအိတ်အရှည်တွေနဲ့တွဲဝတ်တာ။ လုံခြုံတယ်လို့ ပြောလို့ရတာပေါ့နော်.. ဟိုပေါ် ဒီပေါ်တော့ ၀တ်တာ သိပ်မတွေ့မိဘူး.. အမ မတွေ့တာလည်း ဖြစ်မယ်ထင်တယ်.. မိန်းကလေးတွေ ခေတ်မီမီ လှတာနဲ့ ဟိုပေါ် ဒီပေါ် သရုပ်ပျက်ဝတ်တာနဲ့ ခွဲခြားတတ်ဖို့ လိုတယ်လို့ တွေးမိတာပါပဲ.. 😦
ပုံရိပ်, on March 3, 2009 at 7:25 am said:
ဖော်တာနဲ့ လှတာ မခွဲခြားတတ်လို့လား မသိ။ မလေးမ ရေးတာကို ထောက်ခံပါ၏။ မြန်မာပြည်က လူငယ်တွေ ၀တ်ပုံစားပုံ ပြောင်းလဲသွားတယ်။
SoeMoe, on March 3, 2009 at 9:00 am said:
အရမ်းကောင်းတဲ့ ပိုစ့် လေးပါ။
ကြယ်ပြာ, on March 3, 2009 at 9:12 am said:
လေးမရေ … .ဒီပို့စ်လေးကို သဘောကျလိုက်တာ … ဟုတ်တယ် … ၀တ်စားဆင်ယင်တာကို ဂရုစိုက်သင့်ပါတယ် … တလွဲဆံပင်ကောင်းနေတာတွေအများကြီး ….
layma-layma, on March 3, 2009 at 9:28 am said:
မှတ်ချက် ၆ ခု ရှိသွားပြီ.. Amigo ကလွဲလို့ကျန်တဲ့ ငါးယောက်က အမျိုးသမီးတွေချည်းပဲ…။ မီ.. မနုစံ.. ပုံရိပ်… စိုးမိုးလေးနဲ့မကြယ်ပြာ …။ အဟတ် … ကောင်လေးတွေ လာသွားတာတော့ တွေ့ သား ..။ သို့ သော် Vivian ကို မထိရဲဘူးထင်တယ်..။ အရမ်းမြန်တဲ့ မောင်ကြွက်တောင် ခြေမချရဲဘူး… ဟို မောင်လေးတွေလည်း
တွေ့ လိုက်သား…။ တစ်လုံးတစ်လေတောင် ဘာမှ မပြောသွားဘူး…။ ဟား… ဟား… စတာပါ… အသည်းယားလို့ခုလိုရေးတာပါ… ။ မလေးမက အနော်တို့စားပေါက်ပိတ်အောင် လုပ်နေတယ်လို့မကျိန်ဆဲရင် တော်ပါပြီ…။ 😛 😛 😛 သဘောကျလို့စတာ စိတ်ချိုးနဲ့ နော်…။
သားကြွက်, on March 3, 2009 at 10:31 am said:
ဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့ ယောက်ျားတွေကြည့်တာ အပြစ်မဟုတ် သူတို့က ကြည့်အောင်ဝတ်ပြတာကိုး နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ငရဲကြီးပါတယ် ။ ဟုတ်တယ် တီကြွက်ရေ့ တစ်ချို့လေးတွေကျတော့လည်း ခေတ်မှီတာထက်လွန်တယ်လေ တစ်ခါခါ ကိုတောင် မျက်နှာပူတယ် ဥပမာဗျာ………ဘောင်ဘီကြပ်ကြပ် ၀တ်လာပြီး စာပွဲမှ ထိုင်စားနေတဲ့ ကောင်မလေးပေါ့ အကျီဲကခါးထိပဲဆိုတော့ တင်ထိ မလုံဘူး ထိုင်ချလိုက်တော့ ဘောင်းဘီက ကြပ်ပြီး အောက်ရောက်သွားတယ် ဆိုတော့ကား အထဲက အနီရောင်လေး အပြာရောင်လေးတွေက အမောင် ကာလသားတွေကို လှောင်နေသလိုလို ပြောတော့ပါဘူးလေ မောင်မျိုးက လိုက်ကြည့်နေတယ်ဖြစ်အုံးမယ် မြင်ကွင်းထဲ ၀င်လာလို့ပါ ။
(ရေးတာရိုင်းသွားလျှင် ဆောရီး မြင်တာကို မြင်တဲ့ အတိုင်းရေးခြင်းပါ )
ကြွက်မီ, on March 3, 2009 at 8:10 pm said:
း-) မောင်မျိုးကော်မန့်ကို ထပ်ဖတ်ပြီး ရယ်နေပါတယ်။ မရိုင်းပါဘူးလေ။
အ၀တ်အစားမလုံအောင်ဝတ်တာကမှ ဘေးမှာရှိတဲ့လူအပေါ် ရိုင်းတယ်လို့ အောက်မေ့တယ်။ အထူးသဖြင့် မောင်မျိုးပြောသလိုကြီး။ (စိတ်ဆိုးနဲ့သယ်ရင်း)
ဘယ်နိုင်ငံမှာမဆို ကိုယ့်အဆင့်အတန်း အလုပ်တာဝန်နဲ့ လိုက်ပြီး အမြင်တော်အောင် ၀တ်စားကြပါတယ်။ ပင်လယ်ကမ်းခြေကိုတော့ ဘယ်သူမှ ရုံးတက်သလိုမသွားပေမယ့် ကစားကွင်းသွားလမ်းသလားတဲ့ပုံစံနဲ့လည်း လူလူသူသူနေရာတွေကို မသွားပါဘူး။
MhawSayar, on March 4, 2009 at 7:51 pm said:
စကပ်အတိုနဲ့ မီးပူတိုက် (မတ်ရပ်စားပွဲပေါ်တင် တိုက်လျင် ကိစ္စမရှိ)၊ စကပ် အကျပ်နဲ့ ငရုတ်သီးထောင်း (ထိုနည်းလည်းကောင်း)။
သေချာတာကတော့ တစ်ချို့သော မြန်မာမိန်းကလေးတွေ ကိုယ်လုပ်ရမယ့် အလုပ်နဲ့ ဘယ်အဝတ်အစားနဲ့ သင့်တော်သလဲ ဆိုတာ သိပ်မတွေးချင်ကြဘူး လို့ပဲ ပြောရမယ် အစ်မရေ။ ဆိုလိုတာကတော့ အဝတ်အစား ဝတ်တဲ့နေရာမှာ ကာလံ၊ ဒေသံ ကို ဦးစားပေး မစဉ်းစားပဲ လှချင်တာ (အင်း. ဆွဲဆောင်မှု ရှိချင်တာပေါ့.) ဒါ တစ်ခုကိုပဲ နံပါတ် (၁) ဦးစားပေးမိရင်တော့ ငါးပါးမှောက်မှာပါပဲ။
မကြည့်ချင် မြင်ရက်သား ဆိုသလို မတော်ရာ မြင်မိရင်တော့ လူဟာ လူဖြစ်ကြောင်း ဇာတိသွေး ပြလာကြမှာပါပဲ။ တစ်ချို့သူတွေက လွဲလို့ပေါ့။ ဒါနဲ့ တစ်ဆက်တည်း အမျိုးကောင်း သမီးလေးတွေပါ လုံလုံခြုံခြုံဝတ်စားပါလျက် ရိုင်းပြစော်ကားခံရရင်တော့ အထက်က ဟာတွေရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ အကျိုးဆက်တွေ လို့ပဲ သတ်မှတ်ရမှာပါ။
အမျိုးသား ယဉ်ကျေးမှု ဆိုပြီး ကျောက်ခေတ်က ယဉ်ကျေးမှုကို ဘယ်သူမှ အခုထိ ထိန်းသိမ်းနေတာ မရှိသလို၊ ၂၂ ရာစု ယဉ်ကျေးမှု ဆိုပြီး လမ်းပေါ်တက် ဘီကီနီ နဲ့ ဟန်ရေးပြလို့လည်း မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
ဘယ်နိုင်ငံ၊ ဘာလူမျိုးပဲ ဖြစ်ဖြစ် လူဟာ လူ့ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ နေတာဖြစ်တဲ့ အတွက် ဟီရိ နဲ့ သြတပ္ပ ဆိုတဲ့ တရား (၂) ပါးကနေ လုံးလုံးလွတ်ကင်းပြီး ပြုမူ နေထိုင်ကြမယ် ဆိုရင်တော့ အခက်အခဲတွေ၊ အကျပ်အတည်းတွေ၊ ပြဿနာတွေနဲ့ တစ်နေ့ မဟုတ်တစ်နေ့တော့ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ ကြရမည်သာ ဖြစ်ကြောင်း ခေါင်းထဲ စဉ်းစားမိသမျှ ကို လက်က တောင်ရောက် မြောက်ရောက် ရေးပြီး ကောမန့် အဖြစ် စကားလုံး ကြီးကြီးဖြင့် မန့် လိုက်ရပါကြောင်း အစ်မရေ။ 😀
ချစ်စု, on March 5, 2009 at 10:45 am said:
ညီမလေးလည်း တခါတလေ မိန်းမအချင်း၂တောင် မကြည့်ရဲဘူး ။ ငါပဲအဖွားကြီး ဖြစ်နေလားလို့ တောင်စဥ်းစားမိတယ်။ အခုခေတ်ကောင်မလေးတွေက တော်၂ဆိုးတယ်။ ကောသလမင်း အိပ်မကby်တွေက မှန်နေတယ် အစ်မေ၇…
အိမ့်ချမ်းမြေ့, on March 5, 2009 at 1:26 pm said:
မလေး ကျောင်းတုန်းက ဗာဓံပင်တန်းအောက်က ခုံလေးမှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ထိုင်နေတုန်း ရှေ့ကအီကိုဆောင် ၀ရံတာပေါ်က ကောင်လေးတွေက လမ်းလျှောက်လာတဲ့ အမကြီးတစ်ယောက်ကို အရမ်းငမ်း (အဲလေ) အရမ်းကြည့်နေကြတယ်။ ၀ရံတာမှာ ထွက်ရပ်နေတဲ့ ကောင်လေးမှန်သမျှ အကုန်ပဲ။ မလေးတို့လဲ အဲဒီယောင်္ကျားလေတွေ ဘာကိုဒီလောက်ကြည့်နေလဲဆိုပြီး အဲဒီအမကြီးကိုကြည့်လိုက်တော့ အဲဒီအမကြီးရဲ့ အကျီ င်္က နောက်မှာ ဘာမှ မပါဘူး။ ကျောက အကုန်ပြောင်နေတယ်။ ကြိုးကိုလည်ပင်းသိုင်းဝတ်တဲ့ဟာမျိုးကို ၀တ်ထားတာပါ။ ဒါ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀နှစ်ကျော်ကျော်က ဖြစ်တာဆိုတော့ ခေတ်ကလဲ ခုလောက်မပွင့်လင်းသေးဘူးပေါ့နော်။
ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး လေးမရဲ့ ဒီပိုစ်လေးဖတ်ပြီး သတိရသွားလို့။
ကနေဒါ အထက်တန်းကျောင်းတွေမှာတောင် ကြိုးလေးတစ်ချောင်းတို့ ချက်ပေါ်ပြီးလာရင်တို့ အိမ်ပြန်ပြီး အ၀တ်လဲရပါတယ်။
USAကိုကို, on June 1, 2010 at 5:50 am said:
မီးမလာ-ရေမမှန် နိုင်ငံရေးရှုတ်ထွေးပြီးသာမာန်လူတွေအဖို့စားဝတ်နေရေးအဆင်မပြေတဲ့ကိုယ်နေခဲ့တဲ့တိုင်းပြည်ကိုနှိုင်းယှဉ်ရေးထားမကောင်းဘူးလို့ထင်တယ်။ခင်ဗျားအထင်သေးရင်မြန်မာစာလုံးတလုံးတောင်ခင်ဗျာနဲ့မတန်ဘူး-ရေးမနဲ့ဗျာ။ခင်ဗျားသိပါတယ်.မြန်မာနိုင်ငံမှာလိုအပ်ချက်တွေအများကြီး။ တဖြည်းဖြည်းအားပေးကူညီရမှာပေါ့.ခင်ဗျားမြန်မာပြည်အတွက်စွမ်းဆောင်ခဲ့ဘူးလား။
ကိုဖြိုး, on June 1, 2010 at 9:40 pm said:
ဝေဝေ, on June 1, 2010 at 9:50 pm said:
zt, on March 6, 2009 at 10:16 am said:
ခေတ်ရေစီးကြောင်းပါပဲ။ ကျွန်တော့် အမေဆိုရင် မိန်းကလေးတွေ ထမီ နဲ့ ဘောင်းဘီရှည်က လွဲရင် တစ်ခြား စကတ် ဘောင်းဘီတို စတာတွေ ဝတ်တာကို အရင်တုန်းက နည်းနည်းမှ ကြည့်မရပါဘူး။ အင်္ဂလန်လို နိုင်ငံမျိုးမှာ ၃ လလောက် သွားနေတဲ့ အချိန်မှာတောင် သူကိုယ်တိုင် ထမီပဲ ဝတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စင်ကာပူ မှာ အနေကြာတော့ တူမတွေ ပေါင်လည်လောက် စကတ်ဝတ်တာ သူ့အတွက် အထူးအဆန်း မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ဦးလေးကိုယ်တိုင် သူ့သမီး ရန်ကုန် ပြန်လာတဲ့အချိန် စင်ကာပူမှာ စကတ်အတိုနဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ့လို့ ရိုက်နှက်ဆုံးမ ခဲ့ဖူးပေမယ့် သူကိုယ်တိုင် စင်ကာပူ ရောက်လာတော့ စကတ်အတို ဝတ်ထားတဲ့ သမီးနဲ့ပဲ အတူတူ လျှောက်လည်ခဲ့တာပါပဲ။ အတူတူ ဓာတ်ပုံ ရိုက်ခဲ့တာပါပဲ။ သူ့ အနေနဲ့ ဒါကို လျှပ်ပေါ်တာ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာ မြင်သွားပြီလေ။ ဒီမှာ မိန်းကလေးတိုင်း ဒီလို ဝတ်နေကြတာပဲ။ ဒီထက်မက ဆိုးတဲ့ ဝတ်စား ဆင်ယင်မှု တွေလည်း သူကိုယ်တိုင် မြင်သွားခဲ့တာကြောင့်ပါ။
ကျွန်တော်ကတော့ နေရာဒေသနဲ့ ဆိုင်တယ် လို့ပဲ ယူဆပါတယ်။ ကုမ္ပဏီမှာ Formal ဝတ်တာ လူတိုင်း ဝတ်လို့ အထူးအဆန်း မဟုတ်ပေမယ့် Outing မှာ Formal ဝတ်သွားရင်တော့ အဟားခံရမှာပါ။ ယောက်ျားလေးတွေ နှောင့်ယှက်တာကို ခံရတာကလည်း ဥပဒေနဲ့ ဆိုင်ပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာ လမ်းဘေးမှာ လျှောက်နေတဲ့ မိန်းကလေးတွေ့ရင် ဘယ်လိုပဲ ဝတ်စားထားထား ကားပေါ် ဆွဲတင်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ ကောင်တွေ ဒုနဲ့ဒေးပါ။ (မယုံရင် ကားပွဲစားတွေ မေးကြည့်ပါ။ မမလည်း သူ့ပို့စ်မှာ ရေးဖူးပါတယ်။) ဒီမှာတော့ ကလပ်ထဲမှာ မိန်းကလေး စကတ်အတို ဝတ်ထားတာ တွေ့လို့ သွားပြီး နှောင့်ယှက်ရင် ကံမကောင်းလို့ကတော့ ရဲစခန်းတောင် ရောက်နိုင်ပါတယ်။ တရား ဥပဒေက မိန်းကလေးတွေကို အပြည့်အဝ အကာအကွယ် ပေးထားပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း သူတို့ လုပ်ချင်ရာ လုပ်ရဲ ကြတာပါ။
ကျွန်တော်တို့တွေ ခေတ်ရေစီးကြောင်း ပြောင်းတာကို လက်ခံပေးရမှာပါ။ တစ်ချိန်က Tattoo ထိုးမှ မြန်မာ ယောက်ျားပီသတယ်လို့ ယူဆကြတယ်။ အခုတော့ Tattoo ထိုးရင် လမ်းသရဲ လို့ ယူဆတယ်။ အရင်က ဆံပင်ရှည်ထားမှ ယောက်ျားပီသတယ်။ အခုခေတ်က ဆံပင်အရှည်ကို ဓာတ်ပုံမှာတောင် ဆင်ဆာဖြတ်တယ်။ ကဲ အဲဒီတော့ ယဉ်ကျေးမှု ဆိုတာ ဘာပေတံလဲ။ ခေတ်နဲ့ လိုက်ပြီး ပြောင်းနေတဲ့ ပေတံတစ်ချောင်း လို့ပဲ ပြောရပါလိမ့်မယ်။ အခုလက်ရှိ ၄-၅ နှစ်လောက် ကလေးကိ ကွက်မကြည့်ဘဲ ပိုပြီး ရှည်လျားတဲ့ ကာလကို မြင်အောင်ကြည့်နိုင်ရင် အပြောင်းအလဲကို လက်ခံနိုင်ပြီး ပိုပြီး စိတ်ချမ်းသာပါလိမ့်မယ်။
USAကိုကို, on June 1, 2010 at 5:51 am said:
BLACK DREAM, on March 7, 2009 at 4:11 am said:
Excellent ပဲ အစ်မရေ…။ သိပ်ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့ ပို့စ်ပဲ..။ ကျွန်တော်သာဆိုရင်တော့ အကြွေစေ့နဲ့မပြစ်ဘူး..။ ကျောင်းတုန်းကလို သားရေကွင်း မှင်စွတ်ပြီးတော့သာ ပြစ်လိုက်တော့မယ်..။ လူဆိုတာကလဲ နဲနဲလောက်ဖြစ်ဖြစ် အထိနာဖူးမှ အမှတ်ရှိတာကိုး 🙂
ညိမ်းညို, on March 7, 2009 at 1:35 pm said:
ဒါပေမဲ့ အစ်မကြီးပို့စ်ကို သဘောတူတယ်။
အပေါ်က ကွန့်မန့်ရှင်တွေရေးပေးကြတာလည်း ဆင်ခြင်စရာတွေပါပဲ
layma-layma, on March 7, 2009 at 3:22 pm said:
>Amigo… အင်း.. ဟုတ်တယ်.. အကိုင်းအသစ်..။ ရုပ်ရှင်ကြည့်ခဲပေမယ့် ကြည့်မိသမျှထဲက သဘောကျတာလေး ရေးမိမလားလို့ ..။ ဒီလိုပါပဲလေ…။ ဘာလို့ မဆိုင်တော့တာလဲ… အတိတ်ကရောဘာလဲ…။
နိုင်ငံခြားသားကျတော့ ဘာအရိပ်အယောင်မှ မပြပေမယ့် ထင်ချင်သလိုထင်သွားတတ်ပါတယ်
ဆိုတဲ့ သတိပေးစကားလေးအတွက် မီလေးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…။
>မနုစံ… အစ်မတို့ဆီက အကြောင်းလေးကိုပါ ဗဟုသုတ ဖြစ်စရာ ပြောပြပေးသွားတာ ကျေးဇူးပါ..။
>ပုံရိပ်.. စိုးမိုး.. ကြယ်ပြာ… ထောက်ခံတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..။
>သားကြွက်.. အဟီး.. ဆွပေးလိုက်တာ…။ မိန်းကလေးတွေမှ မဟုတ်ပါဘူးနော်..။ ချက်ပြုတ်နဲ့ဘတ်စ်ကားတွယ်စီးတဲ့ ကောင်လေးတွေလည်း.. ပြောကိုမပြောချင်ဘူး..။
>မီ.. သိပ်မှန်တာပေါ့.. မီရေ.. သူနေ ရာနဲ့သူ ၀တ်ရမှာပေါ့..။
>မှော်ဆရာ.. စာလုံးကြီးကြီးနဲ့များများကြီး မန့် သွားတဲ့ အရာတွေအားလုံး .. အထူးသဖြင့်..
့ကိုယ်လုပ်ရမယ့် အလုပ်နဲ့ ဘယ်အဝတ်အစားနဲ့ သင့်တော်သလဲ ဆိုတာ သိပ်မတွေးချင်ကြဘူး လို့ပဲ ပြောရမယ် ) .
.. အစ်မ ဆိုလိုချင်တာလည်း ဒါမျိုးပါပဲ… ကျေးဇူးပါ..။
>ချစ်စု… မချစ်စုက အဖွားကြီးဆို လေးမက ဘွားအေကြီး… အဟဲ… အဖိုးကြီးက ချစ်တယ်မဟုတ်လား.. အဖွားကြီး…။
>မလေး.. ကနေဒါက စတိုင်လ်ပြောပြတဲ့ မလေး… ငယ်ငယ်က အကြောင်း ရေးပြတဲ့ မလေး.. ကို ကျေးဇူးတင်ပါတ.ယ်..။
ရန်ကုန်မှာ လမ်းဘေးမှာလမ်းလျှောက်နေတဲ့ မိန်းကလေးတွေ့ရင် ဘယ်လိုပဲ ဝတ်စားထားထား ကားပေါ် ဆွဲတင်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ ကောင်တွေ ဒုနဲ့ဒေးပါ။ (မယုံရင် ကားပွဲစားတွေ မေးကြည့်ပါ။ မမလည်း သူ့ပို့စ်မှာ ရေးဖူးပါတယ်။)…
ဘယ်မမရဲ့ ဘယ်ပို့ စ်မှာ ရေးထားတာလဲဟင်… လင့်ခ်လေးပေးပါဦး..။ သိပ်စိတ်ဝင်စားလို့ ပါ…။ သေချာရေးသွားတဲ့ မှတ်ချက်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..။
>blackdream… အမယ်လေး.. ကြောက်စရာကြီး.. သားရေကွင်းနဲ့ တဲ့… လက်လဲတည့်မယ့်ပုံပဲ…။ 😛
>ညိမ်းညို… ဘိုညိမ်း.. အဆင်ပြေပါတယ် ဘိုညိမ်းရေ…။ ဆင်ခြင်စရာတွေ ဆင်ခြင်သွားတော့ အကျိုးများသပေါ့ကွယ်…။ ဘိုတင့်ကြီးကတော့ မထိရဲဘူးတဲ့.. ။
THS, on March 8, 2009 at 5:18 pm said:
zt, on March 11, 2009 at 1:12 pm said:
ရွှေတိဂုံဘုရား အလှူခံပုံး ပို့စ်ကို ပြောတာပါ။